दैनिक राशिफल : आज चम्किँदैछ यी राशि भएकाहरुको भाग्य
काठमाडाैं | माघ ५, २०७८
तपाई केहि नराम्रो समाचार पाउँदा क्लेश बढ्नेछ । भावनात्मक हिसाबले धेरै बलियो महसुस गर्नु पर्नेछ । गाह्रो अवस्थामा साथीलाई मदत गर्दा तपाईले दुखको छुटकारा पाउनुहुनेछ सम्बन्ध पनि बलियो हुनेछ ।
पारिवारिक सहयोग प्राप्त हुनेछ । दुर्गमस्थान र टाढाको यात्रा सम्भावना छ तर अनावश्यक यात्राबाट जोगिनु राम्रो हुन्छ । मनोरञ्जन पूर्ण समय रहेको छ . कामधन्दा र व्यवसायको चापले गर्दा प्रेमिकासंग र दाम्पत्य सम्बन्धमा सामान्य चिसोपन देखिन सक्छ ।
परोपकार र धार्मिक क्षेत्रमा लगानी गरेमा अझ राम्रो हुनेछ । रोकिएका काम सम्पादन हुनेछन् । कसैसँग सामान्य झगडा पनि हुन सक्छ । सवारी साधन हाँक्दा अपनाएको सचेतका कारण चोटपटकबाट जोगिनु हुनेछ । बौद्धिक क्षेत्रको काममा लामो यात्राको सम्भावना छ ।
छर–छिमेकमा केही असमझदारी बढ्ने योग देखिए पनि प्रतिस्पर्धाबाट फाइदा उठाउन सकिनेछ । प्रयत्न गर्दा टाढाको यात्रा गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्न सक्छ । पतिपत्नीमा अविश्वास बढ्ने योग छ । व्यावसायिक यात्रा सम्भावना छ । आतिथ्यपूर्ण सम्मान पाइएला ।
व्यस्त दिनको बावजुद एक परिवारसंग एक महान समय खर्च गर्नुहुनेछ । विवाहबाह्य सम्बन्धबाट टाढा रहनुहोस् । स्वास्थ्यमा समस्या आउन सक्ला र स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बन्धी नियमहरु पालना गर्नु महत्वपूर्ण छ ।
तपाईको प्रतिरक्षा प्रणाली बलियो बनाउनुहोस् । अधिक विचारको कारण तपाईमा नकारात्मकता महसुस गर्नुहुनेछ । तपाईंको शरीरमा केहि नकारात्मक परिवर्तनको कारण, तपाईंको उत्साह कम हुनेछ तर आज द्रव्यप्राप्तिको योग देखिन्छ ।
तपाई पैसासंग सम्बन्धित ठूलो लगानी बनाउनको लागी कोशिश गर्नु हुनेछ । सम्पत्तीको व्यवहार तपाईको पक्षमा हुनेछ, जस मार्फत तपाईले आफ्नो वित्तीय पक्षलाई सुदृढ पार्न समर्थन पनि प्राप्त गर्नुहुनेछ ।
जागिर परिवर्तन गर्ने चाहना अधिक तीव्र हुनेछ, तर तत्काल नतिजा प्राप्त नभएकोले नकारात्मक सोचले तपाईलाई बढी असर पार्नेछ । पार्टनरको आवश्यकताहरू बुझ्ने प्रयास गर्नुहोस् र मिठो भोजनको लागि आज मिलाउनुहोला ।
आकस्मिक खर्च बढ्नुका साथै अर्थ अभाव देखापर्न सक्छ । आम्दानीका स्रोत भने कमजोर बन्नेछन् । बेलैमा होस नपुग्नाले फाइदा गुम्न सक्छ। काममा हस्तक्षेप गर्नेहरू सक्रिय हुनेछन् ।
समयमा होस पुग्नाले व्यवहारमा अगाडी परिएला । आफ्नाबाटै नजिकिनु पर्ने स्थिति आउन सक्छ । भैपरी आउने खर्चले चिन्ता बढाएपनि अरु कुरामा लाभनै रहला । धेरै मिहिनेत पनि राम्रै फल प्राप्त हुनेछ ।
अधिक श्रमका कारण मन र शरीरको थकान महसुस गर्न सकिन्छ । घाँटी दुख्ने वा चिसो असुविधा जस्तो हुन सक्छ । व्यापार गतिविधिहरु सामान्य रहन्छ । कार्यस्थलमा गइरहेका समस्याहरूले तपाईलाई दबाब दियता पनि सफलता मिल्नेछ ।
दाम्पत्य जीवनमा पारस्परिक समस्या आउनसक्ला । घरमा केहि अशान्तिमय वातावरण हुनेछ । आफन्तजनको नमिठो वचनले मन दुखित रहला ।
ज्यो. पं. घनश्याम पोख्रेल (९८४१४७९७०७)
जेठ महिनाको राशिफल : राशिअनुसार हेर्नुहोस् आफ्नो भाग्य
मेष यो महिना विद्यार्थीहरू कुनै पनि क्यारियर सम्बन्धित समस्याको समाधान प्राप्त गरेर खुसी हुनेछन् । ग्रहको स्थान अनुकूल छ । यसैले नया कामको थालनी गर्दा राम्रो हुनेछ । तपाईंको क्षमता र सम्भाव्यता खुल्लमखुल्ला मानि...
दैनिक राशिफल : राशिअनुसार हेर्नुहोस् आजको आफ्नो भाग्य
मेष लामो समयको लागि योजनाहरू बनाउनुभएको थियो, ती लक्ष्यहरू प्राप्त गर्नका लागि आज शुभ समय रहेको छ । बच्चाहरूलाई कार्यका साथ सहयोग गर्दा उनीहरूमा सुरक्षाको भावना पनि जगाउँछ । आपसी विचारहरूको आदानप्रद...
मेष कार्यस्थलमा कर्मचारीहरूसँगको कुनै पनि विवादको समाधान हुनेछ । नीतिहरू र योजनाहरूमा लगत्तै काम गर्नुहोस् जुन तपाईं यो समयमा तपाईंको व्यवसायको लागि बनाउनुभएको छ । कम्प्युटर, मेडिया आदि सम्बन्धी व्यवसायमा ...
जेठ ८, २०७९
मेष पढाइलेखाइमा सुधार भएर जाने तथा उत्कृष्ट नतिजा हात लाग्नेछ । सामाजिक क्षेत्रमा तपार्ईले गरेको काम समयमा सम्पन्न हुने हुँदा चर्चा चुलिनेछ । आफुलाई मनाउने र आफ्नै भावनाहरूलाई बढी महत्त्व दिने कुरामा जिद्दी...
मेष नयाँ प्रेम गर्ने अवसरका साथै प्रेम विवाहमा परिणत हुने योग छ । खानपानमा ध्यान दिनु जरुरी छ । उत्सावर्द्धक समाचार सुन्न पाइनेछ । प्रेम र मित्रताको बन्धन कसिने बेला छ । आर्थिक पक्ष राम्रो हुनेछ । वृ...
मेष आज बाह्य सम्पर्कहरू लाभदायक हुनेछन् । समझदारी र विवेकका साथ काम गर्दा हरेक शर्त तपाइँको पक्षमा हुनेछ । परिवार र साथीहरूसँग उत्कृष्ट समय पनि खर्च हुनेछ साथै, स्वतन्त्र रूपमा खर्च गर्न चाहना पनि हुनेछ। वृ...
टोखामा सम्पन्न भयो नगर कार्यपालिका सदस्यको निर्वाचन, एमालेका उम्मेदवार निर्वाचित
आज संसद् बैठक बस्दै, नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल हुने
२५ मिनेट अघि
स्तरोन्नतिका लागि १ करोड खर्चिएको सडकमा अलिअलि पानी पर्दा बिजोग
संसदमा झण्डै ३ घण्टा सम्बोधनमार्फत ओलीले गरे ‘रेकर्ड ब्रेक’
रोष्ट्रमबाट ओलीले कटाक्ष गर्दा बसेकै ठाउँबाट देउवाले दिए जवाफ